Tulle for ikhishi
I-tulle yama-monophonic yesikhashana noma i-tulle ngamaphetheni isebenza njengomhlobiso omuhle wokuvula amafasitela. Ngenxa yendawo yayo yokuhlobisa, iyakwazi ukunikeza ikhishi ukukhanya okuncane, okwenza isimo sobumpofu nokuthula kuyo.
I-Tulle ithandwa kakhulu emhlabeni jikelele, ngakho uhla lwayo lukhula nsuku zonke. Inombolo yezinhlobo ezahlukene ze-tulle inkulu kakhulu kangangokuthi ngezinye izikhathi kunzima ukukhetha eyodwa.
Ukukhetha ukukhipha ikhishi, imibono yokuklama kufanele ihambisane nesitayela esivamile salolu gumbi. Ngokuqondene nokuthungwa nombala wezinto ezibonakalayo, kungaba kokubili ukugqama okuqhakazile kanye nesizinda esingathathi hlangothi kwezinye izinto ezithakazelisayo.
Tulle nama-eyelets ekhishini
I-Tulle kwi-eyelets izoba iphelele ehambisana nanoma iyiphi ingaphakathi, izokwenza ikhishi elihle futhi lihle. I-tulle yindwangu yechungechunge, engxenyeni engenhla yayo enezimbobo ezinkulu, ezihlotshiswe ngeso. Izindandatho zingaba ipulasitiki nezensimbi. Benza kokubili imisebenzi yokuhlobisa nokusebenza. I-eye ivumela i-tulle ukuba ihambe ngokukhululekile eceleni kwe-cornice futhi ifake amafolda afanayo okungafani.
I-Tulle - igridi ekhishini
Inetha le-tulle lenziwe ngezinto zokwakheka (ilineni, isilikhi, ukotini) kanye nokwenziwa (nylon, kapron, lavsan). Lewebhu yesakhiwo semifino yezinombolo ezihlukahlukene. Kukhona igridi ye-tulle ene-airy weave yezintambo kakhulu, kanye ne-coarser eyodwa. Ama-honeycombs ayo angaba ngobukhulu obuhlukahlukene - kusukela kokuncane kunazo zonke kuya kobukhulu.
I-grid-tulle ihlangana ngokuphumelelayo ne-interior yokhuni. Kuzofanela kahle ekhishini ngebhokisi noma ematheni, ikakhulukazi uma i-cottage noma indlu eseduze kwamanzi.
I-tulle noodle ekhishini
I-noodle ye-Tulle ngendlela yama filaments amade ajwayelekile futhi ayinqobo kakhulu. Ngokungangabazeki, lokhu kuyindlela yokuwina yamafasitela ekhishi lakho. I-tulle enjalo ifanelana nanoma iyiphi ingaphakathi futhi ibukeka ilungile ngama-lambrequins, izimpumputhe ezingapheli, izindwangu zakudala, njll.
Yenziwe ngezingqinamba ezinhle zekhwalithi kuze kufike ku-5 mm ububanzi, okungahlotshaniswa ngebuhlalu obukhulu beparele.
Le nto ayitholakali ukukhipha. Ukuqedwa kalula, akugcini futhi akudingi ukufaka ama-ironing, akushisi elangeni futhi akuchitheli. Ngosizo lwe-noodle ye-tulle, awukwazi ukuhlobisa kuphela iwindi, kodwa futhi nokuhlobisa ama-arches, eminyango.
Tulle nge-lambrequin ekhishini
Kungaba ngezinhlobo ezimbili. Ama-lambrequins anzima ngaphandle kwama-flounces ne-drapes azohlobisa ikhishi langaphakathi lekhishi, kuyilapho ama- crease azofaka isithunzi.
I-lambrequin encane ivame ukusetshenziselwa egumbini lokuphumula noma ekamelweni lokulala, kodwa ekhishini libukeka lihle futhi lihle. Iqukethe amahlumela aluhlaza, azinzile zombili izinhlangothi, futhi aphethwe ngendwangu ehlotshiswe ngamathebulethi ezinhlangothini. Ukuze wenze igumbi likhanyise, abaningi bakhetha i-tulle emfushane ekhishini, engabambeli ukukhanya.
I-Lambrequin ikuvumela ukuba ufihle amaphutha bese unikeza iwindi iphelile. Ngesizo salo, ungakwazi ukubuka ukulinganisela kwewindi.
Tulle for ikhishi ngefasitela bay
Ukuba khona ekhishini lewindi lesibhakabhaka kuyisipho sangempela kubalandeli bomklamo wangempela. Umklamo we-tulle ekhishini enefasitela ye-bay kufanele ucatshangelwe ngokucophelela.
Ukukhanya okungeziwe kwemvelo kwenza ikhishi likhanyise kakhulu, libukeka libanzi. Ngakho-ke, ukunakwa okukhethekile kufanele kunikezwe ekwakhiweni kwamafasitela. Ngokujwayelekile ziboshelwe iziFulentshi, izimpumputhe noma izimpumputhe. Ngomusa nangomusa ekhishini elinamafasitela e-bay, ukufakwa kwamafasitela ngokubukeka kwe-tulle eguquguqukayo.
Ukuthenga i-tulle emhlophe ekhishini, kufanele ukhethe izinto ezilula ukugeza futhi ungalahleki.
Ikhishi lihlangene nebhokisi
Iminyango yangaphakathi yeglasi
Izinkuni zomlilo ezikhungweni zasehlobo
Isitayela sokuhlobisa okuhlobisa
Izingane ezinesitayela se-Provence zezimfihlo zokudala intombazane
Ifenisha eqoshiwe ekhuni
I-Katavi National Park
Ukwakhiwa kwehholo eKhrushchev
I-Puppies Bernese Mountain Dog
I-Dream Ukuhumusha - imali nokuchazwa kwamaphupho ahlobene nemali
Inyama ye shish kebab
Kungani bephupha ngamahlengethwa olwandle?
Imyuziyamu yobuciko obusetshenzisiwe
Umthelela ogcwele weNyanga ngamunye
Ama-sweatshirts wezemidlalo amantombazane
I-oven yezitini ekhaya
Amakhansela e-Murano ingilazi
Ukudla nge-myomas ye-uterine
Ukuvikelwa kwamafasitela kusuka kubantwana
I-Aglaonema - ukukhiqiza
Kulungile kangakanani ukubala amasonto okukhulelwa?
UMila Jovovich nendodakazi yakhe baya embukisweni waseMarc Cain eBerlin
Shar Pei - ukunakekelwa
I-Basement siding - izinhlobo zanamuhla ze-plinth trim, izici zokufaka